ကုန်ကြမ်း (1,5-dimethylhexyl) Ammonium အမှုန့် (5984-59-8) - Phcoker
SKU: 5984-59-8 အမျိုးအစား: အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု
ကုန်ကြမ်း (1,5-dimethylhexyl) Ammonium အမှုန့် (5984-59-8) ကဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း (1,5-dimethylhexyl) Ammonium အမှုန့် (5984-59-8) ကလိုရိုက်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ထုတ်ကုန်အမည် ကုန်ကြမ်း (1,5-dimethylhexyl) Ammonium အမှုန့်ကလိုရိုက်
ဓာတုအမည် ကုန်ကြမ်း (1,5-dimethylhexyl) Ammonium အမှုန့်ကလိုရိုက်; 2-Heptanamine, 6-methyl-, Hydrochloride (1: 1)
အမှတ်တံဆိပ် NAmE ကုန်ကြမ်း (1,5-dimethylhexyl) Ammonium အမှုန့်ကလိုရိုက်
CAS အရေအတွက် 5984-59-8
မော်လီကျူး Formula C8H20ClN
မော်လီကျူး Wရှစ် 165.7041
Monoisotopic Mass 235.207 g / mol ။
ရေဆူမှတ် 229.3 mmHg မှာကို C ° 760
ဇီဝဗေဒတစ်ဝက်-ဘဝ ရေ၌မလြှော့ (ဝက်ဘဝ2ရက်)
Solubility အရည်အမိုးနီးယား, hydrazine, diethyl အီအတွက်ပျော် acetone အတွက်အနည်းငယ်ပျော်ဝင်, ethyl acetate အတွက် iSoluble
Application အချို့သောဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါကုသမှုတစ်ခုအက်ဆစ်သော pH မှာဆီးထိန်းသိမ်းထားဖို့, distal ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ tubular acidosis ရှာဖွေရေးမှာမှပါးစပ်အက်ဆစ်တင်စမ်းသပ်မှုအတွက်ပြင်းထန်ဇီဝဖြစ်စဉ် alkalosis ၏ကုသမှုအတွက်စနစ်တကျ acidifying အေးဂျင့်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ကုန်ကြမ်း (1,5-dimethylhexyl) Ammonium ကလိုရိုက်အမှုန့် (5984-59-8) ဖျေါပွခကျြ
ကုန်ကြမ်း (1,5-dimethylhexyl) Ammonium အမှုန့်ကလိုရိုက်သည့်ဖော်မြူလာ NH4Cl နှင့်ရေအတွက်အလွန်အမင်းပျော်ဝင်ကြောင်းကိုအဖြူရောင်ပုံဆောင်ခဲဆားနဲ့အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ပါတယ်။ Ammonium ကလိုရိုက်၏ဖြေရှင်းချက်ရစေရန်အက်ဆစ်ဖြစ်ကြသည်။ Sal ammoniac Ammonium ကလိုရိုက်၏သဘာဝ, mineralogical ပုံစံ၏နာမည်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဓာတ်သတ္တုလေ့ကျောက်မီးသွေး-ဆင်းသက်လာဓာတ်ငွေ့ငွေ့ရည်ဖွဲ့ကနေကျောက်မီးသွေး Dumps ကိုမီးရှို့အပေါ်ဖွဲ့စည်းသည်။ ဒါဟာအစမီးတောင်အပေါက်တွေအချို့အမျိုးအစားများကိုလှည့်ပတ်တွေ့ရှိရပါသည်။ ဒါဟာအဓိကအား liquorice အချို့အမျိုးအစားများအတွက်ဓာတ်မြေသြဇာနှင့်အနံ့အရသာအေးဂျင့်အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ဒါဟာနှင့် Hydrochloric acid နှင့်အမိုးနီးယား၏တုံ့ပြန်မှုကနေထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။
လှုပ်ရှားမှု၏ (1,5-dimethylhexyl) Ammonium ကလိုရိုက်အမှုန့် (5984-59-8) ယန္တရား
ထုံဆေးဟာ Hydrochloride သို့မဟုတ်ယုန်ရဲ့မျက်စိမှ 2-အမိုင်နို-6-methylheptane အခမဲ့အခြေစိုက်စခန်း၏ဖြေရှင်းချက်၏အပူပိုင်း application ကိုထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ သွေးကြောသွင်း pentobarbital ဆိုဒီယမ်နှင့်အတူ anesthetized ခွေး, 2-အမိုင်နို-6-methylheptane Hydrochloride ပြပွဲ 1 / 500-1 / 1000 epinephrine ၏ pressor လှုပ်ရှားမှု၌တည်၏။ 2-အမိုင်နို-6-methylheptane Hydrochloride ကျုံ့၏နှလုံးမှုနှုန်းနှင့်အလွှဲခွင်တစ်ခုတိုးစေတွေ့ရှိရပါသည်။ သွေးကြောသွင်း pentobarbital ဆိုဒီယမ်နှင့်အတူ anesthetized ခွေး, 0.5-အမိုင်နို-1.0-methylheptane Hydrochloride ၏ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏2မှ6၏ဆေးများမီလီဂရမ်နှုန်းကီလိုဂရမ်အတွက်သေးငယ်တဲ့အူခြင်း, ဆီးဆီးအိမ်, ဆီးလျှို့ဝှက်ချက်သို့မဟုတ်အသက်ရှူ၏ detrusor မရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ Intraperitoneally ကြွက်အတွက် 2-အမိုင်နို-6-methylheptane Hydrochloride Non-အဆိပ်ဆေးများအတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုနှိုးဆွတဲ့ဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏နီးပါးလုံးဝကငျးမဲ့ဖြစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ အဆိုပါ tracheo-bronchial သစ်ပင် mucosa ၏ယားယံ၏အဘယ်သူမျှမ histological သက်သေအထောက်အထားအသီးသီး2နှင့်6နေ့ရက်ကာလအဘို့နေ့စဉ် 10-အမိုင်နို-30-methylheptane အခမဲ့အခြေစိုက်စခန်းရှူရသောယုန်သို့မဟုတ်ကြွက်များတွင်မှတ်ချက်ပြုသည်။
အသုံး (1,5-dimethylhexyl) Ammonium ကလိုရိုက်အမှုန့် (5984-59-8) ၏
▪ octamylamine တစ်ဆေးဝါးအလယ်အလတ်နှင့်အမျှ
တစ်ဦးကစနစ်တကျ acidifying အေးဂျင့်▪
အကြံပြု (1,5-dimethylhexyl) Ammonium ကလိုရိုက်အမှုန့် (5984-59-8) သောက်သုံးသော
တာဝန်ရှိသူတဦးကထိုးအကြံပြုချက်များ (1,5-dimethylhexyl) Ammonium ကလိုရိုက်ဘို့ရာခန့်ထားသောခဲ့ကြခြင်းမရှိပါ, သို့သော် DMAA မှတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများနှင့်တူညီအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးရှေးရိုးစွဲလုံခြုံထိုး 1mg မှတက် bodyweight ၏ 160mg / ကီလိုဂရမ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ LD50 ကြွက်မှ (1,5-dimethylhexyl) Ammonium ကလိုရိုက်ဒ (အားလုံးစမ်းသပ်တိရစ္ဆာန်များ၏ထက်ဝက်ကိုသတ်ရန်လိုအပ်သည်ထိုး) 59mg / ကီလိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစျဖနျ, ကပိုပြီးသုတေသနဖြည့်စွက်အတွက်ကျယ်ပြန့်ဖြန့်ချိမတိုင်မီကောက်ယူရပါမည်, ယခုနှင့်ထွက်ရှိသောအဘို့အရှေးရိုးစွဲဆေးများနှင့်အတူကပ်ရန်အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါကြောင့်လည်းတစ်ဦးအစာစားချင်စိတ်ဖိနှိပ်အဖြစ်နေ့ကိုတလျှောက်လုံးကိုယူနိုင်ပါတယ်နေချိန်မှာပညာရှိသောသူကိုအချိန်ကိုက်ကသင်တန်း၏ရှုထောငျ့မြှင့်တင်ရန်ကူညီရန်ကြိုတင်တစ်ဦးယလေ့ကျင့်ခန်းမှ 30-60 မိနစ်ကိုယူတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
(1,5-dimethylhexyl) Ammonium ကလိုရိုက်အမှုန့် (5984-59-8) ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
♦ bronchodilators ( ပို. လေထုစီးဆင်းမှုများအတွက် bronchi ၏ခွံ့ပြုသည်) အဖြစ်ခေတ္တ
(ရှူဖို့လျော့နည်းသွားရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အထို့ကြောင့်ပိုကောင်းစွမ်းရည်များအတွက်သွေးကြော constricting) ♦ Decongestant လှုပ်ရှားမှု။
♦ (1,5-dimethylhexyl) Ammonium ကလိုရိုက်ရုတ်သိမ်းဘို့သုံးနိုင်တယ်စွမ်းအင်အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အာရုံနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။
♦ (1,5-dimethylhexyl) Ammonium ကလိုရိုက်အမှုန့်အေးဂျင့်လွှတ် monoamine အဖြစ်ရှုမြင်ထားတဲ့ဒြပ်ပေါင်းများအလားတူဖွဲ့စည်းပုံကိုင်ထားပါ။ ဒါကြောင့်အလားအလာထိုကဲ့သို့သော dopamine နဲ့ noradrenaline အဖြစ် monoamines ၏အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်နိုင်, ဖြစ်ပါတယ်။
♦ဒါကြောင့်ကျိန်းသေပိုပြီးပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းကိုထောကျပံ့နှင့် RPE (ရိပ်မိခေတ္တခဏ၏နှုန်းမှာ) လျော့နည်းကျဆင်းနိုင်ပါတယ်။